About Us - Changzhou longxin milina Co., Ltd
Brief fampidirana ny Company
Changzhou Longxin milina Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2001 miaraka amin'ny tahirim-bola 30 tapitrisa voasoratra anarana. Ny foibe hita amin'ny fampandrosoana ny faritra avaratra Hengshanqiao Tanàna ao amin'ny atsinanana manamorona an'i Changzhou tanàna, dia manakaiky ny sisintany any Beijing-Shanghai lalamby haingam-pandeha, Shanghai-Nanjing lalamby haingam-pandeha sy Shanghai-Chengdu expressway. Longxin dia manokana simika mpanamboatra milina fitaovana amin'ny faritra tanteraka tokony ho 13.600 metatra toradroa.
Mampifandray ny lafiny ara-teknika Longxin fikarohana, ny fampandrosoana sy ny fanamboarana, mihoatra ny 20 taona 'traikefa matihanina famokarana. Ny orinasa mamokatra indrindra indrindra "Longxin" & "Huabao" milina marika horonan-taratasy ny boky telo fikosoham-bary, hydraulic horonan-taratasy telo fikosoham-bary, solosaina CNC horonan-taratasy telo fikosoham-bary, Bead fikosoham-bary, Nano tanimanga fasika fikosoham-bary, sns planeta Mixer mamaritra koa izahay, mampiditra, hametraka sy hanitsy ny rehetra mifandray tanteraka tsipika vokatra araka ny mpanjifa ny mangataka amin'ny ny fitaovana. Ny milina dia be nampiasaina tamin'ny ranomainty, coating, elektronika Mametaka, fanafody famonoana bibikely, ny hery bateria, Nano fitaovana, isan'andro simika, plastika hoditra, pensilihazo, sakafo, loko, silicone fingotra, ary ny ditin guar etc.
Ny orinasa izay mizara izao tontolo izao efa mandroso ny teknolojia ny mitoto vary, ary niparitaka aminao teknolojia manana matihanina R & D ekipa, ary foana ny zava-baovao sy ny mpitarika ny revolisiona ao amin'ity orinasa. Tsy mahazo mihoatra ny 20 ny patanty zavatra mari-pankasitrahana, anisan'izany ny 5 entana ny fanasana Patents. Afaka manome fivoriana matihanina tsipika araka ny mpanjifa 'takina ny famokarana. Ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Brezila, India, Rosia, Japana, Korea, Singapore, Azia Atsimo sy ireo firenena hafa sy ny faritra, ary mahazo laza avo amin'ny lafim-piainana rehetra.
Changzhou Longxin milina Co., Ltd manana sata boninahitra isan-karazany, anisan'izany ny teknolojia avo-toeram-piasana, Ultra-pirenena manokana vovoka tsara teknolojia fikarohana afovoany, micro-Nano fiomanana ara-nofo sy mandroso hoatr'izany fitiliana toerana, sy ny lefitry ny filohan'ny vondrona Shinoa Association ranomainty. Longxin milina dia amin'ny certifications ny TüV, BV, tamin'ny taona sy ISO09001: 2018.
Ny foto-kevitra dia miovaova "Quality Voalohany, Excellent Service, Mpanjifa Satisfaction". Tonga soa amin-kitsimpo namana na ao an-trano sy any ivelany hiara-miasa aminay ary mamorona hoavy mamirapiratra ny orinasa simika miaraka!
Mahomby fahazoana orinasam-panjakana.
Mitombo capital sy Longxin milina Co., Ltd dia naorina.
Longxin hydraulic telo Roller Mill dia nivoatra.
Longxin CNC telo Roller Bead Mill sy Mill dia mivelatra.
Longxin High Viscosity Bead Mill dia nivoatra.
Longxin voafidy ho filohan'ny lefitra rafitra Sinoa Association Ink.
Longxin Bead Mill nahazo maromaro Patents-pirenena.
isan-taona Output danja maherin'ny 60 tapitrisa sy Silicone milina sampana naorina.
Longxin i alalana ho National Manokana Ultra-tsara vovoka teknolojia foibe fikarohana.
Longxin i alalana ho Avo-teknolojia orinasa.
Longxin handroso hatrany, tonga zava-bita lehibe amin'ny ho avy.
Tsy tapaka toro lalana: Quality Voalohany, Excellent Service, Customer Satisfaction
Rehetra mpiasan'ny Longxin hitondra ny mpanjifa amin'ny lehibe sy tompon'andraikitra toe-tsaina, manaraka ny fanompoana hevitry ny hoe "naka ny mpanjifa ho toy ny foibe sy ny fandraisana ny fangatahana ho toy ny mpitari-dalana", nanomboka avy amin'ny mpanjifa ny fangatahan'ny, haben'ny ny mpanjifa ny fanantenana, ary farany ny mpanjifa ny fahafaham-po . Aoka ny olona rehetra mahatsapa ny mpanjifa ny fahadiovam-po avy mialoha fivarotana ny aorian'ny-fivarotana.
Professional Team, mifantoka amin'ny Fitotoana Vary Teknolojia
Longxin dia manana tantara ny 20 taona mahery. Ao amin'io 20 taona, izahay efa mifantoka amin'ny zavatra iray kilasy voalohany Fitotoana Vary famokarana fitaovana. Teo ambany fitarihan'i ny ambony famokarana sy ny R & D injeniera, no namorona matihanina famokarana sy ny fampandrosoana ekipa, nametraka ny fototra mafy ho an'ny fitomboan'ny ny Fitotoana Vary raharaham-barotra.
Innovation tsy misy farany: Tandremo nihanika
Longxin manana sata boninahitra isan-karazany, anisan'izany ny teknolojia avo-toeram-piasana, Ultra-pirenena manokana vovoka tsara teknolojia fikarohana afovoany, micro-Nano fiomanana ara-nofo sy mandroso hoatr'izany toerana fitiliana. Alalan'ny fanatsarana sy fanavaozana mitohy, Longxin efa eken'ny ny mpanjifa sy nahazo laza avo. Ho foana ny hanorina ny marika sy hanitatra ny fanavaozana.